Semalt: Ahoana ny fampiasana ny tranokala fanitarana tranokala
Maro ny lesona ho an'ny DIY amin'ny Internet. Raha toa ka mila mamoaka tahiry kely fotsiny ianao, dia afaka manampy ny tutorials. Saingy raha mila manaisotra be dia be amin'ny angon-drakitra be dia be ianao, dia tokony manakarama orinasa mpitrandraka tranonkala matihanina. Ny Crawlboard dia iray amin'ireo mpamatsy tolotra toy izany, ary olona maro no nampiasa izany noho ny asa ratsiny. Tena mahomby ny sehatra - grande vegas casino no deposit bonus codes 2014. Noho izany, manolo-kevitra ny olona izay mila manangona tahiry be dia be matetika.
Ankoatra ny fahombiazany, dia mora ampiasaina ihany koa. Ny dingana tsotra natao hampiasana ny sehatra dia nofaritana eto.
Mandehana amin'ny pejy fangatahana tranonkala CrawlBoard amin'ny fipihana ity rohy ity. Fenoy araka ny tokony ho izy ny taratasy fisoratana anarana. Misy saha ho an'ny anadahy voalohany, anarana, adiresy mailaka orinasa, ary asa andraikitra. Rehefa vita ianao, tsindrio fotsiny ny bokotra famantarana. Halefa any amin'ny adiresy mailaka nomena anao ny mailaka automatique. Sokafy ny mailaka ary tsindrio ny rohy fanamarinana mba hampiasana ny kaonty CrawlBoard vaovao.
Ny tanjona voalohany amin'ity dingana ity dia ny manampy ny tranonkala hikolokolo, fa mila mamorona voalohany sit -oupo aloha ianao. Ny sitegroup dia andiana tranonkala manana rafitra mitovy. Izany dia ho an'ny olona izay matetika mila ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala maro atsy ho atsy.
Mba hamoronana sitotan-tserasera, kitiho ny rohy "Mamorona tranokala vaovao". Mipetraka eo amin'ny ilany ankavanana amin'ny boaty fifantenana sitegroup. Aorian'izany, azonao ampidirina daholo ireo tranonkala rehetra ao amin'ny sitegroup tsirairay avy, tsindrio ny rohy Add izay eo an-jorony havanana amin'ny pejy. Avy eo dia fidio ireo tranokala tsirairay avy.
Mandehana mankany amin'ny fikandrana fananganana sitroup mba hanome anarana miavaka ho an'ny sitegroup anao. Tadidio fa ny tranonkala rehetra ao amin'ny sitegroup dia tsy maintsy manana ny rafitra iray ihany, raha tsy izany dia mety tsy hahazo ny votoaty marina ianao.
Mba hahatakatra ny dikan'ny sitegroup, makà toerana misy lisitra ho an'ny ohatra. Raha toa ka asaina manaparitaka asa amin'ny toeram-piasana ny tetikasa nangatahana, dia mila mamorona sitegroup ianao mba hifanaraka amin'ilay sehatra ary ny tranonkala rehetra ao amin'ny sitegroup dia toerana misy ny lisitry ny asa.
Araka ireo saha ilaina ao amin'ity efijery ity, dia mila mifidy ny faharetan'ny angon-drakitra, ny famolavolana, ary ny fomba fandefasana. Ny habetsaky ny tahiry mivoaka isan'andro dia isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana, ary mahazatra.
Ho an'ny format delivery, afaka mifidy iray amin'ireo XML, JSON, ary CSV ianao. Ary amin'ny fomba fanodinana, mila mifidy eo amin'ny FTP, Dropbox, Amazon S3, ary REST API.
Natao hanome fanazavana fanampiny ny efijery. Ny mpampiasa dia mamaritra ny tetikasan-drakitry ny tranonkalany bebe kokoa. Na dia tsy voafetra aza dia zava-dehibe ny mampiditra fampahalalana fanampiny satria arakaraky ny hamaritanao ny asanao, raha ny tolotra mpandraharaha no hahatakatra tsara izay tianao, ary hanome vokatra tsara kokoa izany.
Azonao atao ihany koa ny mangataka saram-peo fanampiny ampiasaina eto amin'ity efijery ity. Ny sasany amin'izy ireo dia ny firaketana fampiantranoana nozaraina, Firaketana ny rakitra, ny famandrihana Sary, ary ny fandefasana ny saran-dalana.
Eto ianao, mila tsindry fotsiny ianao amin'ny bokotra "Alefaso amin'ny fanaovana tsindry". Ny tanjona dia ny hanamarina raha afaka manamarina raha toa ka vita ny asanao. Hahazo mailaka mampahafantatra anao ianao raha mety ny asanao na tsia. Raha izany dia afaka mandehandeha ianao ary mandoa vola. Raha vantany vao voamarina ny volanao, dia hanao fihetsiketsehana ny ekipan'ny CrawlBoard.
Aorian'ny fandaniana, dia mila miandry ny fehezan-tsidinao ianao ao amin'ny format voatondro aminao, amin'ny alàlan'ny fomba fanolorana tianao.